PowerPoint နှင့်အတူကိုကူညီပါ။ အသုံးပြုဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
PowerPoint နှင့်အတူကိုကူညီပါ။ အသုံးပြုဘယ်လိုနေသလဲ?
ဤအစီအစဉ်နှင့်အတူတစ်ဆလိုက်ဖန်တီးပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆလိုက်စာသား, သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်ဆံ့နိုငျသညျ။ သင်, ဆလိုက်၏အမိန့်ကိုပြောင်းလဲ add, မလိုအပ်သော delete အဖြစ်ဆလိုက်များ၏ content တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ခန်းစာ PowerPoint 2007 အခုပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်လိုပြောပြပါ။
သင်တစ်ဦးတင်ပြချက်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်အစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်အခါ, သငျသညျအဓိက window ၏အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်ရှိရုံး button ကို click နဲ့ New ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအလွတ်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်စာမျက်နှာ။ ဤသည်ကို default အမြင် layout ကိုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် layout ကို option ကိုစာမျက်နှာအပြင်အဆင်အပေါ်ဆလိုက်အပိုင်းအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်နိုင်ပါသည်။
စာမကျြနှာကိုလယ်တွင်တွေက dotted လိုင်းများကို အသုံးပြု. ၎င်း၏နယ်နိမိတ်ညွှန်ပြရန်။ ခေါင်းစဉ်ဆလိုက်၏မူဘောင်အတွင်းမှာပဲ, စာသားရိုက်ထည့်ပုံနေရာတစျခု-အရောင်သို့မဟုတ် gradient ကိုဝစွာအားဖြင့် field ရဲ့အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျနော်တို့တင်ပြချက် template ကိုဖန်တီးနေတဲ့သီးခြားဆောင်းပါးရှိသည်။ သင် header ကိုစာသားရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖောအမျိုးအစားနှင့်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲအရောင် options အမျိုးမျိုးကိုဖွင့်ကောက်ရန်အဖြစ်စာသား align ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိသေး၏။ နယ်စပ်အပြင်ဘက်ကိုနှိပ်ခြင်း, ငါတို့ခေါင်းစဉ်ဖို့အဆင်သင့်ရလိမ့်မယ်။ အလားတူပဲ, စာတန်းထိုးဘောင်ဆလိုက်များတွင်စာသားရိုက်ထည့်ပါ။
စာမကျြနှာပျေါမှာရုပ်ပုံထည့်သွင်းဖို့, Insert ဖဲကြိုး GT ကို click ကျေးဇူးပြုပြီး; သင့်လျော်သောရုပ်ပုံရုပ်ပုံနှင့်ကိုရွေးပါ။ ဒါဟာတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်တပ်မက်လိုချင်သောအရွယ်အစားလျော့နည်းသွား, လှည့်, စာမကျြနှာန်းကျင်ရွှေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုသင်ပုံရိပ်တွေ၏တင်ဆက်မှုဝန်ကြောင်းအကြံပြု PowerPoint တင်ပြချက်များဖန်တီးသောအခါပုံမှန်အမှားတွေရည်ညွှန်းပါဘူး။
အဆိုပါတိပ်ခွေပင်မစာမျက်နှာအပိုင်းဆလိုက်ပေါ်သစ်တစ်ခုဆလိုက်တင်ဆက်မှုကိုထည့်သွင်းဖို့တစ်ဆလိုက် Create သည့်တံဆိပ်များကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဖိုင်တွေကိုအနေဖြင့်စားပွဲတစ်ခု, ဇယား, drawings နဲ့ဓာတ်ပုံတွေ, စုဆောင်းခြင်းထံမှကလစ်ပ်: တစ်ဆလိုက်၏စာသားထဲမှာသင်ဆလိုက်သို့ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်တခြားအဘယ်သို့သောအကြောင်းတို့သည်တံဆိပ်များသဲလွန်စတွေ့နိုင်ပါသည်။
သင်ဖဲကြိုးဒီဇိုင်းကိုမှသွားလျှင်, သင် options များတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျပြောင်းလဲမှုမျိုးများထဲမှစာမျက်နှာ၏တင်ပြချက်အပေါ်ကိုပဲအခါ။ အဆိုပါအဆင့်မြင့် Options button ကိုလျှော့ချသင်တစ်ဦးနမူနာအဖြစ်ရွေးချယ်ထားဆောင်ပုဒ်ကယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါဆလိုက်ဖလှယ်သို့မဟုတ်မလိုအပ်တဲ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်, တိပ်အမျိုးအစား GT ကိုသွား; Sorter တွန်း။
အဆိုပါတင်ပြချက်ကယ်ဖို့, သင်ရုံးခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအဖြစ်သိမ်းဆည်းရွေးဖို့ရှိသည်။ အဆိုပါတင်ပြချက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Screencasts Power Point
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,226 စက္ကန့်ကျော် Generate ။